ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken မှ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | MONREC
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီးဖြစ်သူ Mrs. Lise Nordgaard တို့အား ယနေ့ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်ရီ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်း တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနှင့် နော်ဝေအကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွှန်လွှာအရ နော်ဝေပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအေဂျင်စီနှင့် နော်ဝေ ရေသုတေသနဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း စီမံကိန်းများ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် စီမံကိန်းအပိုင်း(၂) အကောင်အထည်ဖော်သည့် အခြေအနေများ၊ အမျိုးသားအဆင့် ရေဝပ်ဒေသစာရင်းထုတ်ပြန်ရန် ဆောင်ရွက်သည့် အစီအမံများ၊ ရေဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်း၊ အင်းလေးကန်နှင့် အင်းတော်ကြီးကန်တို့မှ ရေနမူနာများ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမည့် အခြေအနေများနှင့် ရေဆိုင်ရာအချက်အလက် (database) တည်ထောင်နိုင်မည့် အလားအလာများ၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပင်မစီမံကိန်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအား ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ပြုစုထုတ်ပြန်သည့် အခြေအနေများ၊ ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သမုဒ္ဒရာတွင်း ပလပ်စတစ်အမှိုက်များ လျော့နည်းစေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Nationally Determined Contributions-NDC) အစီရင်ခံစာပါ ဦးစားပေးကဏ္ဍများ၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများ၊ အခြေအနေနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အလားအလာများ၊ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုတိုးမြှင့်ရေးနှင့် သစ်တောပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။